Mofom-bary miaraka amin'ny Thermomix - fomba fahandro nentim-paharazana | ThermoRecipes
tsindrin-tsakafo47 minitraOlona 8
Pofom-bary is the tsindrin-tsakafo ankafizin'ny rafozako lahy. Rehefa fantatro fa ho avy izy ireo dia manandrana manao izany aho satria tian'izy ireo izany, iza no tsy tia! Raha manadino aho indraindray, rehefa avy tao an-trano nandritra ny fotoana kelikely, dia alatsaho ilay andian-teny hoe: Tsy nataonao manao puding-bary ve aho androany? Ny rafozam-baviko dia tsy te-hanao ahy satria mihinana azy io amin'ny fotoana iray izy ireo.
Mora ny manao satria, na dia mila fotoana kely aza, aza mailo izany. Mivoaka mamy be toy ny vita amin'ny fomban-drazana izy io, saingy maharitra adiny roa vao vita ary tsy mijanona ny fikorontanana.
Misy hafa kinova vegan manan-karena toy ny fomba fahandro nentim-paharazana ary mifanaraka tanteraka amin'ny sakafonao tsy misy akora niavian'ny biby. Afaka mampiasa ianao Ronono soja na hafa voaniho izay misy fikitika exotic be koa.
Ary raha mbola tsy hitanao ny fomba fahandro tianao indrindra, dia mamporisika anao aho hijery ity iray ity. fanangonam-bidy miaraka amin'ny fomba fanamboarana pudingam-bary rehetra Inona no ananantsika navoaka hatreto.
Tsindrin-tsakafo mahazatra sy matsiro.
Fotoana hiketrehana: 47M
1,5 l. ronono iray manontolo
Soso-koditra voasary (na voasarimakirana)
Apetratsika amin'ny lolo ny lolo ary ampio ny vary, ny ronono, ny hazo kanelina ary ny voasarimakirana. Izahay dia manao fandaharana 40 minitra, mari-pana 100º ary hafainganam-pandeha 1.
Rehefa vita dia ampio ny siramamy sy dibera. Izahay dia manao fandaharana 7 minitra, mari-pana 100º ary hafainganam-pandeha 1.
Miaraka am-pitandremana dia esorinay ny lolo, ny hazo kanelina ary ny voan'ny voasary volomboasary.
Manompo anaty vilia baolina izahay ary rehefa somary tezitra izy dia apetraka ao anaty vata fampangatsiahana. Manompo amin'ny alàlan'ny famafazana vovoka kanelina eo amboniny isika.
Fanazavana fanampiny - Vary misy ronono soja / Vary kapoaka misy ronono voanio sy manga / Fomba fanamboarana puding 9 mba hahagaga ny vahininao
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsotra, Postres
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Postres » Pofom-bary
Tsara be, nataoko tamam-pahamendrehana mihitsy aza mba hihinanan'ny diabeta azy ary matsiro ...
Tsy mahazo resipeo izay nokarohako tamin'ny volom-bary na mivoaka maina na mivoaka lasopy be aho ary rehefa tsy mivoaka matanjaka amin'ny voasarimakirana dia tsy hitako ny lakileny hahitanao raha afaka manampy ahy ianao ity fomba fahandro ity izay Tsotra ary tsy mahay azy aho dia efa nanao resipeo maro ary tsy misy, misaotra
Mamaly an'i maria victoria
Salama, tsy azoko hoe maninona amin'ity resipeo ity no ilazanao fa maharitra adiny roa vao vita satria ny fotoana nametrahanao 47 minitra fotsiny dia misy zavatra tsy mahomby amiko ary tsy fantatro hoe inona izany? Miarahaba ary misaotra
Salama Carmen, rehefa nilaza aho fa naharitra adiny roa ny fanaovana azy, ny tiako holazaina dia ny nataoko izany tamin'ny vitro ary tsy voatery hijanona tsy hamporisika ianao mba tsy hijanona. Etsy ankilany, miaraka amin'ny Thermomix, mila fotoana kely kokoa ary ambonin'izany rehetra izany dia tsy mila fantarina izany. Mirary ny soa indrindra.
feint dia hoy izy:
Salama ry zazavavy, hanombohana fiarahabana ao amin'ny bilaogy tiako ary satria tiako be ny manamboatra fisaorana noho ny fomba fahandro tsotra sy matsiro napetrakao. Te-hanontany fotsiny aho raha afaka manampy ronono mihoampampana amin'izany ary inona ny refy raha izany. Misaotra anao!! Mirary ny soa indrindra.
Valiny ho an'i Amagoia
Salama Amagoia, afaka manampy 200 gr ianao. ronono matevina ary esory ny 100 gr. ny ronono mahazatra. Ny ambin'ny resipeo dia mitovy. Raha manandrana ianao dia ampahafantaro ahy hoe nanao ahoana izany.
Misaotra betsaka anao nijery anay ary manantena aho fa mbola tianao ny tohinay. Mirary ny soa indrindra.
Salama Elena, nanao ny fomba fanamboarana ny volom-bary aho araka ny natoronao azy, manana tsiro tsy azo resena io, tiako io, saingy tsy tiako ny firafiny, toa flan io, tsy dia azonao atao ny mankasitraka ny voam-bary, eo ve na ahoana na ahoana fa feno kokoa ny vary ??, misaotra betsaka
Salama Esther, mila mametraka fotoana kely kokoa ianao. Raha tokony ho 40 minitra dia manandrama 35 hahita izay hevitrao. Mba hahamarika kokoa ny vary dia tsy maintsy apetrakao ao anatin'ny fotoana fohy kokoa. Andramo ary lazao ahy hoe manao ahoana ianao? Mirary ny soa indrindra.
Salama Elena, omaly nataoko ny puding vary ary nahomby !! Nampidiriko ilay ronono mihoampampana araka ny nolazainao tamiko, ary nahafinaritra ... ny hany olana nananako dia ny tsy fisian'ny 3 min hamita ny fizotran'ny dingana rehetra dia nitobaka ny zava-drehetra ary soa ihany fa akaiky izany satria raha tsy izany ilay omeko ... eny na izany aza nahafinaritra tokoa ... misaotra betsaka! Mirary ny soa indrindra.
Amagoia, faly aho fa mivoaka matsiro ity tsindrin-tsakafo ity. Heveriko fa ny pudingam-bary dia iray amin'ireo tsindrin-tsakafo mahomby indrindra nataon'ny thermomix ary miaraka amina ronono mihoampampana dia lafo be.
Olaaa yaa fantatro fa ny mety tsy hahomby anao dia ny fiheverako fa diso ny fomba fahandro. Tsy tokony hatao ve ny hametrahana 1º ny maripana ary avelao handeha ny hafainganana? . Mirary ny soa indrindra
Marina izany, manova azy aho dieny izao. Tena tsy nahomby! Misaotra betsaka anao nampahafantatra anay. Mirary ny soa indrindra.
Salama te-hanontany momba ny volom-bary aho raha azonao esorina ny lolo ary asio fihodinana havia sy hafainganam-pandrefesana, io dia tsy aiko mihitsy ny lolo hijanona fa miarina foana izy
Salama Sonia, eny azo atao io, fa tsara kokoa amin'ny lolo. Rehefa apetrakao ny lolo dia ataovy avadika kely ny ankavanana mba hiarovana azy ary raha misintona ianao dia tsy mila mivoaka. Toy izao no iantohana azy ary tsy hiala. Mirary ny soa indrindra.
Salama, nataoko ny puding-bary fa avelako kely kokoa ny fotoana, satria tiako kokoa ny vary. Ahoana no tsy dia kely ny kaloria? Eny, tiako ny hikarakara ny tenako. Tratry ny KRISMASY!
Salama Rocío, azonao atao ny mampiasa ronono semi-skimmed sy mampiasa sweetener, fa ny tena izy dia tsy mitovy. Avy any avaratra aho ary ity pudingam-bary ity dia mampatsiahy ahy ilay mahazatra avy any Asturias. Azo amboarina kely kokoa ny kaloria, fa ny vokany, na dia tsara aza, dia tsy mitovy. Miarahaba sy mirary fety sambatra !.
Manao ahoana daholo! Miarahaba anao amin'ny bilaogy, mahafinaritra! Te-hanontany anao aho, androany aho nanao vary fotsy hohaniko ary satria mbola be ny sisa dia te hanararaotra izany mba hanaovana pudingam-bary, fa amin'ny ora sy hafanana inona no tokony hapetrako hanaovana azy tsara, fantatro fa ny vary efa masaka.
Salama Laura, ny marina dia mbola tsy nanandrana nanao an'io tamin'ny vary efa masaka aho. Tsy sahy milaza aminao ny fotoana aho satria tsy nataoko ary mety diso aho. Miala tsiny fa tsy afaka manampy anao aho. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
Voalohany indrindra, ampahafantaro anao fa tiako ny tranonkalanao ary, isaky ny afaka aho dia manandrana miditra mba hahitako ny fomba hahataitra ny vadiko sy ireo zanako roa kely! Vao tsy ela akory izay no nahitako ilay thermomix ary tsy fantatro raha satria tsy azoko ilay izy na satria tsy maintsy manao approximations kely amin'ny sasany amin'ireo recette hataoko arakaraka ny tsirontsika ... Na izany aza, ity dia iray amin'izy ireo, ny volom-bary ho ahy, tena nety tokoa, toy ny caked ary rehefa nangatsiaka izy dia tsy holazaiko anao bebe kokoa…. Angamba efa ela 40 '????
Salama Yolanda, pozom-bary madinidinika amin'ny fomban'ny Asturian izy ary tsy lava loatra. Raha mijery ny fomba fahandro amin'ny boky Thermomix ianao dia misy 5 minitra fanampiny. Raha tia ranon-javatra bebe kokoa ianao dia tsy maintsy manampy vary kely sy ronono kely kokoa eo am-panaovana dibera sy siramamy. Heveriko fa ho tianao kokoa noho izany ny fomba. Mila mampifanaraka ny fomba fahandro antsika amin'ny tsiro isika.
Salama zazavavy te hiteny aminao zavatra efa nanjo ahy aho ary hahita izay tsy mety ataoko, vao manomboka aho ary mila torohevitra. Eo am-panaovana ny pudingam-bary aho ary tsy nieritreritra zavatra hafa hampiakatra ny kaopy ary tampoka dia nanomboka nivoaka ny ronono, ataoko fa ho ara-dalàna izany ???? Ainss izay maniraka ahy, hahaha. Inona no azoko atao hanamboarana azy, miandry azy hangatsiaka aho ary mamerina azy, m kedaba cm tokony ho 25 minitra. misaotrassssssssss
Salama Lorena, avereno. Mangotraka ny ronono ka izay no antony hivoahany. Ajanona eo ny kaopy ary raha misy mivoaka avy amin'ny sisin'ny kaopy, aza manahy. Andrahoina mandritra ny fotoana lava be vao matevina. Manantena aho fa tianao izany. Holazainao amiko. Mirary ny soa indrindra.
Naveriko io fa nanjary be dia be ary miaraka amin'ny lokon'ny dibera, andao handeha fa tsy fotsy ny ron-kena raha tsy cm ny welts, tsy haiko raha tokony navelako ela kokoa
Salama Lorena, heveriko fa tapaka ianao. Andramo indray mandeha. Manantena aho fa marina ny anao. Mirary ny soa indrindra.
Tsy fantatro raha notapahina tamin'ny farany izy io, fa ny rahalahiko kosa no nihinana azy ary ny lehibeko ary efa nilaza aho fa matsiro izany ka tsy dia nivoaka ratsy ... hizaha raha azonao omena ahy hevitra, ny reniko ao aoriako ka manao Mofomamy misy crème, izay nirinao fatratra, hahaha nataoko tany San Marcos izy tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ary tsy hitako izay hahagaga azy amin'ity faran'ny herinandro ity, ekena ny soso-kevitra, misaotra
Salama Lorena, heveriko fa ho tianao ilay crème crème sy frezy, matsiro. Napetrako ny rohy: http://www.thermorecetas.com/2010/03/19/Receta-Thermomix-Tarta-de-Nata-y-Fresas/
Nametraka mari-pana ambany 90 sy 40 minitra aho avy eo 5 niaraka tamin'ny dibera ary tamin'ny faran'ny saccharin 7 sotrokely ny vadiko dia nisy siramamy kely nivoaka tsara dia misaotra betsaka noho ny resipeo ananako manana ny thermomix mandritra ny 6 taona ary manana aho nahandro bebe kokoa tao anatin'ny 2 volana izay fantatro ianao fa tsy mandritra ny fotoana rehetra, miarahaba anao mahafinaritra
Misaotra betsaka Ana !. Ny tena izy dia ny puding-bary dia mila maka ilay teboka tiantsika tsirairay. Tiako ny hateviny, saingy te hiezaka ny hanazava ny fametrahana ny fomba fahandro aho. Hiezaka ny anao aho. Mirary ny soa indrindra.
! Vao avy namboariko… ..! Fa tsy dibera dia ronono lafarina antsasaky ny kaopy no nateliko ary 5 minitra latsaka… .. !!! mangatsiaka…. hanao tahaka ny reniko…. misaotra sy oroka moana
Azo antoka fa matsiro, Mamiavila. Oroka.
Miala tsiny fa tsy te halahelo an'iza n'iza aho ... ..ny tsaroany fotsiny fa any an-danitra izy! Miala tsiny indray ....
Tsy mandiso olona ianao ary tsy mila mangataka famelana! Toy ny sakafon-dreny tsy misy! ary fahatsiarovana mahafinaritra izy ireo.
!! matsiro tsotsotra .... !!!! Hataoko matetika satria tsy maharitra ary tena ahazoana aina ... tianay ny manisy poza vary andro vitsivitsy ary matory tsara ..... !! !! misaotra betsaka amin'ny recette ... tsy mijery ny boky thermomix akory aho
Misaotra betsaka, Mamiavila! Faly aho fa tianao ilay izy. Mirary ny soa indrindra.
Salama zazavavy, fahombiazana ny tsindrin-tsakafo, indrindra fa ny kely no tia azy fa ny tsara indrindra amin'ny rehetra dia ny fahamorany, satria mitsidika anao aho dia mivoaka betsaka amin'ny Tm.
Faly be aho, Nuria!. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
Salama zazavavy! Tamin'ny herinandro fialan-tsasatra nahabe ity no nanaovako ity pudding vary ity, ary tsy afaka milaza aminao fotsiny aho fa ny vokany dia mahatalanjona, matevina fa matevina, toy ny fanao any Asturias, ary miaraka amina paomazy izay natolotro tamin'ny fotoana iray ihany ny dibera. Tena mendrika ny hatao izy io, mora be ary mirentirenty.
Oroka, ary toy ny mahazatra, misaotra anao tamin'ny asanao.
Faly aho fa tianao izany, Marién! Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
Ilay pudingam-bary tsy mampino, nataoko ho an'ny Fetin'ny Reny ary nahomby izany. Misaotra betsaka amin'ny bilaoginao. Amin'ny herinandro ambony mba hahitana raha sahy manao ny mofomamy amin'ny sôkôla 3 efa ananako ireo fividianana entana.
PS Raha ny fanazavana, karazana vary inona no ampiasainao amin'ity resipeo ity? Misaotra
Salama Maria, tena faly aho fa tianao izany. Ho ahy dia iray amin'ireo tsindrin-tsakafo tsara indrindra izany. Vary SOS foana no ampiasaiko. Mirary ny soa indrindra.
Salama Elena, misaotra betsaka anao mamaly haingana. Mikasika ny vary kosa, ny tiako holazaina dia hoe vary bomba, voamaina lava, basmati no ampiasainao ... Raha misy tsara noho ny iray hafa na tsy miraika.
Salama Maria, vary varimbazaha lava foana no ampiasaiko ary ilay iray avy amin'ny marika SOS. Mirary ny soa indrindra.
fingotra mabel dia hoy izy:
Androany no namboariko ny recette ho an'ny puding-bary ary gaga aho fa natahotra kely aho satria tian'ny vadiko ilay namboarin'ny reniny ary nieritreritra aho fa tsy tiany izany saingy fahombiazana no nitiavany azy ary misaotra anao aho manana Tena tsara noho ny fomba fahandro anao, saingy nahazo be dia be aho satria ny vadiko ihany no mihinana azy raha tsy dia maninona aho no manova ny fotoana na mamela azy.
Mamaly amin'ny siligaoma mabel
raha sanatria ka hamita antsika ireto rangahy ireto sy ireto rafozambaviko ireto !! Soa ihany fa manana mpiara-miasa tsy mahomby isika ... ny Thermomix!
Ny ataoko matetika any an-trano rehefa misy ambim-bary ambiny dia ny manala azy mafy rakotra sarimihetsika mifikitra mba tsy ho be ny rivotra miditra. Avy eo dia manao gilasy izahay ary manandrana… be voninahitra !!!
Tsara, tiako hilazanao amiko ny antony tapaka ny variko ary ataoko toa ny fiarahabana anao Ana izany
Salama Ana, mety ho noho ny karazana vary, na ny marika
… .Ny nataoko ihany,… ..ary JUST ::::::… ..SPECTACULARRRRRR !!!!!!!!!!!!!!!! …… ..
Ho ahy dia tsy misy dingana lehibe iray tsy hita, dia ny siramamy mandoro izay apetraka eo amboniny rehefa mangatsiaka izy, na dia mifanaraka amin'ny tsiro an'ny tsirairay aza izany, fa ho an'ny ankamaroan'ny Asturians fantatro ...
teny an-dalana, tsara kokoa raha mampiasa ny avaratra ankavia isika ???
Salama Angelaurgo, tena tsy fahita firy ny fiparitahan'ny vary sy eo ambonin'ny marika SOS. Voamarikao ve fa napetraka tsara ny lolo? Imbetsaka aho no nanao an'io ary mbola tsy namaky vary mihitsy. Angamba amin'ny manaraka dia afaka manandrana mametraka minitra vitsy ianao ary manamarina ny fahamendrehan'ny vary sy ny endriny. Angamba amin'izay ianao tsy ho tapaka. Hiteny ahy ianao!
Annajulian dia hoy izy:
Ity resipeo ity dia nataoko tamin'ny boky Essential tahaka ny nanomezanao azy ary tsy nety ilay izy. Samy niongana ny voasarimakirana sy ilay hazo kanelina, tsy maintsy nesoriko izy ireo ary ny tsiro dia teo anelanelan'ny mangidy sy masiaka, ary nitandrina aho fa tsy misy ampahany fotsy amin'ny voasarimakirana. Mino aho fa tokony esorina ireo akora ireo alohan'ny nahandro elaela. Ary ahoana?
Valiny tamin'i Annajulian
Ny ataoko dia ny mametraka ny voasarimakirana sy ilay hazo kanelina lehibe, mba tsy hiraraka izy ireo. Fa raha tianao, amin'ny manaraka dia azonao atao ny mamoaka azy amin'ny antsasaky ny fandrahoana sakafo, mba hananan'izy ireo tsiro ary azo antoka fa tsy nofoanana izy ireo. Misaotra nanoratra anay Annajulian!
Ny fiarahana miasa amin'ny voasarimakirana dia sarotra satria raha tsy esorintsika avokoa ny hoditra fotsy dia manome mangidy izany.
Esoriko amin'ny mason-koditra ovy ny hoditra. Ary ireo sombin-javatra fotsy misy dia namboariko mivantana ... Tsy atahorako fa efa nanimba lovia izy ireo! Oroka!
Salama Star, tsy manomboka ny kaopy raha tsy hoe manondro an-kafa izahay.
Mahamenatra fa nivadika ratsy io, dia tezitra be ianao rehefa tsy mivoaka amin'ny fomba tiantsika ny fomba fahandro, sa tsy izany? Mitranga amintsika koa izany, indraindray dia mandrotsaka hatramin'ny roa na intelo in-droa ny resipeo alohan'ny ilazana azy ireo mba hivoarany tonga lafatra. Rehefa tsy toy izany dia tsy tianay koa izany, satria ezaka be no napetrakay isaky ny resipeo hampandeha azy. Fa azo antoka fa ho azonao amin'ny manaraka izany.
Na eo aza izany, tsy ho ela dia hamoaka pudingam-bary hafa izahay, looser kely ary misy fikitihana manokana.
Misaotra nanoratra taminay!
disqus_pSLfG1RjvI dia hoy izy:
Nataoko ny recette amin'ny. veratim ary efa nariako izy. Tsy vary amam-bary fa puree.
Valio i disqus_pSLfG1RjvI
Tena miala tsiny aho. Azonao antoka ve fa napetrakao amin'ny lolo ny lolo? Raha manome fanazavana fanampiny momba ny antony tsy tokony hanariana azy ianao dia afaka manampy anao izahay. Matsiro? Ny firafitra? Ity vary ity dia mahazatra amin'ny thermomix ary mivoaka tsara foana izy. Angamba noho ny marika vary ihany koa, dia mampiasa SOS foana isika. Hilaza aminay ianao! Mirary ny soa indrindra.
Niezaka nanao an'io aho ary rehefa 27 minitra sisa dia nanomboka nivoaka ny vava ny ronono, ary nitaingina ilay kapoaka aza satria teo akaikiny io raha tsy teo ny lakozia ...
Fa maninona no nitranga tamiko izany?
Angamba nametraka mari-pana varoma na ronono kely kokoa ianao ... tsy afaka milaza aminao aho. Manaraka izany andramo ity fomba fahandro hafa ankafiziko ity. Tsy manana dibera izy ary ny endriny tonga lafatra amin'ny tsiriko. Avelako ho anao ny rohy: http://www.thermorecetas.com/2013/05/09/arroz-con-leche-a-la-naranja/
Andao hojerentsika izay hevitrao.
Salama Elena, te-hanome hevitra momba ny fofom-bary aho ary hitako fa napetrakao tamin'ny hafainganam-pandeha 100, nahandro ny ronono rehetra heveriko fa ny mari-pana 90 dia tsara kokoa raha ahenaiko izany ary fangatahana iray hafa tsy ampianao crème! Mirary ny soa indrindra'
Misaotra tamin'ny hevitrao. Indraindray dia mitranga izany ... Ny fampidinana ny mari-pana araka izay nataonao no vahaolana tsara indrindra. Ity ny rohy mankany amin'ny volom-bary izay ataoko matetika ao an-trano. Ity kinova ity dia tsy manana crème na dibera fa toa tsara. Ary tsy vitsy koa ny kaloria ao aminy. Azonao soloina voasarimakirana ny voasary. Ity ny rohy: http://www.thermorecetas.com/2013/05/09/arroz-con-leche-a-la-naranja/
Hellooo !!! Manana fanontaniana aho… Tiako ity fomba fahandro ity ary toa mora ny manamboatra azy, saingy tiako ho fantatra hoe olona firy izy? Ary raha azonao omena ahy ny habetsahana sy ny mari-pana ho an'ny olona roa. Misaotra 🙂
Sarotra ho ahy ihany koa ny mahazo ny hevitr'io fomba fahandro io. Tamin'ity indray mitoraka ity, rehefa avy namaky ny hevitra rehetra dia nanao ny adaptation-ko ary tsara kokoa izany, saingy mbola mila manatsara azy ihany aho. Ronono 500g no nosoloiko ronono lasa etona ary tsy nasiako afa-tsy vary 160, raha tsy izany (toa tsara koa io), ho fanampin'ny voasarimakirana voasary makirana sy ireo minitra voalohany namerenako azy ireo hatrany amin'ny 40 ka hatramin'ny 30 , ny mari-pana 90 foana, amin'ny maripana avo kokoa dia mivoaka izy, ary ny hafainganana hatrany 1. Rehefa avy nesoriko ny hoditry ny voankazo sy ny hazo kanelina, dia nasiako fructose, 125g fotsiny, satria mamy be kokoa nefa hitako izy salama kokoa aho, tsy nasiako dibera, ary nanao programa 10 minitra, maripana 90 aho, ny mari-pana betsaka azoko, ary ny hafainganana 1.
Peter tsara! Misaotra betsaka amin'ny soso-kevitra 🙂
Salama! Misaotra ny asanao 🙂
Nanjary nangidy ny pudingam-bary 🙁 inona no azoko atao na nahoana?
Salama Anna, heveriko fa noho ny voasarimakirana / volomboasary… angamba notapahinareo ny ampahany fotsy be (izay mangidy). Nesorinao ve ilay hoditr'omby? Angamba notorotoroina be ... mety ve ny teboka siramamy?
Salama! Azonao lazaina amiko ve ny fiasan'ny dibera? Misy fiantraikany amin'ny hateviny ve izany? Tiako ny mijanona ho rano kely fotsiny ary tsy apetrako satria ny fiheverana hoe vao mainka mampitombo azy io ... hanampy ahy ve ianao? MISAOTRA
Salama Lorena, manome menaka azy ny dibera, koa aza matahotra fa tsy misy matevina. Ho hitanao fa mahafinaritra! Ataovy ao an-tsaina fa vola kely dia kely izy io ho an'ny ronono be dia be. Azonao atao ve ny milaza aminay raha tianao ny valiny? Misaotra nanoratra taminay! 🙂
Maria del Carmen dia hoy izy:
NITSAKA NY DIANAN'NY "Fihodinana havia" amin'ny THERMOMIX !!!! NAMOTIKO NY ZAVATRA REHETRA IZY ARY NILA NARIKY IZY ... tena lamba ...
Valiny tamin'i Maria del Carmen
Salama Maria del Carmen:
Nojereko sy ampitahako amin'ny boky ofisialy ny fomba fahandro ary marina ny fomba fahandro. Raha napetrakao ny lolo dia tsy mila ny fihodina ankavia ianao.
Ratsy loatra ianao nanary azy satria afaka nanao gilasy fametaka vary ianao !!
Vao nanao ny fomba fahandro aho ary nahafinaritra ilay izy!
Fiovana iray nataoko dia ny manomboka amin'ny fametrahana ny siramamy miaraka amin'ny voasarimakirana sy volomboasary ary totoina tsara. Ny ambiny dia mitovy tanteraka. Tena tsara fa tsy haiko ny tsy mihinana! Tsy hijanona amin'ny sisa amin'ny fianakaviana ve aho??
Miaraka aminao aho Carmen… tsy madio izy io, miaraka amin'ny siramamy feno menaka sy mamy. Tena fahafinaretana !!
Gabriela Pereira-Vargas dia hoy izy:
Salama, mangidy ny variko noho ny voasarimakirana, tsy fantatro fa ny faritra fotsy no nangidy, tiako ho fantatra raha afaka manampy zavatra hanala na hanafina azy aho. veloma misaotra
Valiny tamin'i Gabriela Pereira Vargas
Salama!! Namboariko ny volom-bary, saingy mangidy noho ny voasarimakirana ny fomba fanatsarako azy_
Salama Rosa, sao tsy marikivy izy io, ny ampahany mavo amin'ny akorany ihany no apetraka, izay tsy misy faritra fotsy. Na izany na tsy izany, raha mbola mampangidy anao dia azonao esorina aloha ny voasarimakirana mba tsy hahandro ela na tsy hampidirina mivantana. Manantena aho fa nanampy! Famihinana.
Ma Angels dia hoy izy:
Voalohany indrindra MIARAKA ANAO xr ny asanao ?.
Amiko dia toa tsara foana ny fomba fahandroanao ny puding-bary, manaraka ny torolalana omenao ???.
Farafaharatsiny mba miteny toy izany ny reniko sy ny mpifanila vodirindrina amiko satria satria tsy tiako izany ary be ny vola mivoaka dia zaraiko.
Ireto avy ny fanontaniako: azo ajanona ao anaty laper ve izy io ary hohanina indray mandeha, toy ny hoe natao ora vitsy lasa izay?
Miandry ny valinteninao aho.
Misaotra betsaka dia tohizo !!!
Mamaly an'i Ma Àngels
Salama Ma Àngels, tsy afaka milaza aminao izahay raha afaka mivaingana na tsia. Manana fizarazaran-kevitra ao amin'ny ekipa izahay !! Hehehe ny zava-misy dia tsy nisy nanandrana nanaparitaka azy saingy nisy ny naheno fa afaka ... ka raha te hanandrana mangatsiaka ianao dia lazao anay! Priori iray dia holazaiko aminao fa ny vary tsy dia mangatsiaka loatra nefa fantatsika fa misy ny olona manala azy ka ... sahinao ve ny manandrana azy ka milaza aminay? Misaotra tamin'ny hafatrao 🙂
! Tsara be!
Roser dia hoy izy:
Salama Elena, salama tolakandro!
Te hahafantatra aho raha miaraka amin'ny vary 180g, io no vola farany hitantsika tao anaty lovia fitaratra mangarahara. (Sary)
Amin'izao fotoana izao dia hataoko izany, hanazava aminao aho !!
Manantena aho fa tsy hitady vary.
Valiny tamin'i Roser
Salama Roser, miaraka amin'ny habetsaky ny fangaro amin'ny fomba fahandro, 6-8 eo ho eo no mivoaka. Lazao aminay ny fijeriny anao! Misaotra nanoratra taminay. 😉
naira dia hoy izy:
Efa manana ny hafetsena amin'ny resipeo aho ary mivoaka tsy mampino ...
Ny fanontaniako amin'izao fotoana izao hoe maninona aho no sembana dia ... azo soloina vovoka kanelina ve ilay hazo kanelina?
Misaotra mialoha ... arahaba avy amin'i Lanzarote
Valiny tamin'i Nayra
Nayra tanteraka 🙂 Rehefa tsy manana tehina kanelina aho dia nasiako kanelina kely tany. 1/2 sotrokely kely dia ampy. Misaotra nanoratra taminay!
Nataoko ity recette ity ary navela nitsingevana anaty litatra sy antsasaky ny ronono ny vary, notadiaviko tao anaty boky ilay recette ary tsy voalaza hoe hafainganana 1, hoy ny fihodinana havia, hafainganan'ny sotro, zavatra hafa io
Valiny tamin'i María Luisa
Salama Maria Luisa,
Misy fomba maro hanaovana puding-bary, ny olona tsirairay dia tia puding-bary amin'ny fomba iray. Saingy tsy fahita firy fa aorian'ny nahandro 40 + 7 minitra ny vary dia mijanona mitsingevana anaty ronono. Azonao antoka ve fa napetrakao tsara ny tahan'ny vary sy ronono? Na izany na tsy izany dia jereo hatrany ny bilaogy satria tsy ho ela dia hamoaka fofom-bary mahery mahasalama izay ho matsiro izahay. Misaotra nanoratra taminay.
Atody amin'ny cocotte miaraka amin'ny parmentier sy truffle
Lasopy katsaka sinoa